Vehivavy TIM : tsy maintsy mody i « Dada » – MyDago.com aime Madagascar
Nanao valandresaka hoan’ny mpanao gazety tetsy amin’ny foibe toerana misy azy etsy Belair ny rantsana vehivavy ao amin’ny antoko Tim.Nanambara izy ireo fa :
Eo anatrehan’ny krizy politika eto amin’ny firenena izao dia takian’ireo vehivavy ao amin’ny antoko Tiako I Madagasikara tsy misy hatakandro ary tsy misy fepetra ny fiverenan’ny filoha Marc Ravalomanana izay filoha voafidim-bahoaka.
Lavinay marin-drano ny fanamelohana ny Filoha Marc Ravalomanana tamin’ny raharaha 26 Janoary 2009 ary ny 07 Fabroary 2009, ary maniry ny fanafainganana ny fanadihadian’ny Tribonaly Iraisam-pirenena izay italahoanay amin’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mihitsy hoy izy ireo.
Miantso anareo mpanao politika rehetra izahay mba hifanatona ka hifanaraka.
Trotraky ny adin-tsaina sy rera-batana ary misotro ny aleoko maty mihitsy aza ireo vehivavy tsy mahita ny atolony ny taranany, hanafiana azy , hampianarana azy ireo noho ny fahaverezan’asa.Koa raha mbola natera-behivavy ihany ireo manandra-tena ho mpitondra amin’izao fotoana izao dia mialà fa poizina ho an’ny firenena malagasy,ary mandiniha tena hoy ny zanak’i Dada.
Anjakan’ny toe-tsaina mikororosy ka na ny soa toavina malagasy aza (fifanajana, fifankatiavana, fitiavan-tanindrazana) dia very momoka ka anjakan’ny didy jadona , tsy refesi-mandidy, fitiavam-bola, fitiavan-tseza, fitiavan-tena laroina kolikoly avo lenta sy fandrobana tsy voafehy ny harem-pirenena.
Vahao tsy misy hatak’andro ny gadra izay tsy mitovy hevitra aminareo mpitondra FAT,na sivily na miaramila hoy nyvehivavy TIM.
Marihinay fa na ho aiza na ho aiza dia tsy hahazo fankatoavana iraisam-pirenena mihitsy io fitondrana mpanongam-panjakana io.
Auteur Solo Razafy*Publié le 27 juin 2011 27 juin 2011 Catégories Politique
1 réflexion sur « Vehivavy TIM : tsy maintsy mody i « Dada » »
Mankasitraka tompoko o!mahavelom-bolo ny mahita ny fijorona toy izao ,indrindra moa tsy
vao izao ihany fa hatr@ niandihan’ity tolona mavaivay hatrehantsika ity dia teo foana ianareo,
ary tsy nitandro hasasarana .Ny Tompo anie homba sy hiaino ny tarainantsika isanandro! ary aza kivy fa
efa mamaly vavaka tsikelikely antsika Andriamanitra!aza matahotra fa tsy irery isika ,fa mihaino antsika
« Mbola ho tonga ny fotoana hamirapiratan’ny masoandro,izay voatakon’ny rahona hatramin’izay »
« topazo maso antra ireo esoina sy hankahalaina,mba ho fantany fa ianao no ANDRIAMANITRAY.Faizo
izay mampahory sy maniratsira anay amim-pireharehana »Tompo o!Amen!
Précédent Article précédent : Des réactions au mutisme de bons ou… de mauvais augures ?
Suivant Article suivant : « Zava-dehibe ny tsy fahatongavan’ny FFKM tao Mahamasina » hoy Guy Maxime